सुकेको बाँसमा प्लास्टिकले अड्याएको धारा सांसदद्वारा उद्घाटन ! उद्घानटको दृश्य हेर्दै मानिसहरु पेट मिचिमिची हाँसीरहे ! – ताजा समाचार
सुकेको बाँसमा प्लास्टिकले अड्याएको धारा सांसदद्वारा उद्घाटन ! उद्घानटको दृश्य हेर्दै मानिसहरु पेट मिचिमिची हाँसीरहे !
बढो गजव छ कि बाग्लुङ्ग नगरपालिकाको रु ५ लाख ५७ हजार र वडा नं ७ ढिकीचौरबासीको सहयोग गरी करीब रु १२ लाखको लागतमा सम्पन्न भनिएको उक्त योजनाको खानीपानी पाईप सुकेको बाँसमा प्लाष्टिकको डोरीले बाँधेर अडाईएको छ । त्यसैमा धारा खोलेर गण्डकी प्रदेशका सांसद ईन्द्रलाल सापकोटा एवं बागलुङ नगरपालिकाका नगरप्रमुख जनकराज पौडेलले संयुक्त रुपमा भदौ २ गते उद्घाटन गरेका थिए ।
सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा धेरै हाँस्दै द्रुत विकास हुने देखियो भन्दै ब्याङ्ग गरेका छन । तपाई पनि घोरिएर हेर्नुस् खित्का छाडेर हास्नु हुने छ ।